MACLUUMAADKA TARANKA NOOLAHA EE LOO YAQAAN REDBONE COONHOUND DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Noolaha ee loo yaqaan Redbone Coonhound Dog iyo Sawirro
'Little Miss Lou waa Redbone Coonhound daahir ah. Waxay ku jirtaa 8 bilood sawirkaan. Iyadu waa aad u firfircoon waxayna jeceshahay inay aadaan beerta nasashada halkaasoo ay ku taal balli iyo shimbiro hareeraha ka ceyrsada. Waxay jeceshahay inay dabbaal tagto oo ay maalinta oo dhan dibadda ku ciyaarto. Intooda badanna waxay jecel yihiin alaabteeda jilicsan! Iyadu waa qof aad u jecel oo jecel dhammaan dareenka ay heli karto! Markay guriga joogto way deggan tahay oo wey seexdaa inta badan. '
Liiska eeyaha eyda Redbone Coonhound Mix
cavalier king charles shaybaarada isku dhafka ah ee spaniel
Redbone Coonhound waa qurux badan, adag oo coonhound xoog leh. Waxay leedahay madax nadiif ah oo si wanaagsan loo qaabeeyey, oo leh joogsi dhexdhexaad ah inta u dhexeysa boogta iyo sanka. Dhegaha dhegaha dheer oo sudhan ayaa fidiya ilaa caarada sanka marka eeygu raaco ur. Dabada ayaa toosan loo hayaa Kabaha cagaha ayaa is haysta oo u eg bisad, lehna suuf adag oo xoog leh. Maqaarku waa midab casaan hodan ah. Koodhku waa dhalaalayaa oo siman yahay, wuu fidsan yahay, waana gaaban yahay kan a Gorgor . Midabada koofiyadda waxaa ka mid ah casaan, iyo casaan yar oo cad. In kasta oo Redbones qaar ka mid ah laga yaabo inay raadad cad ku yeeshaan cagaha ama laabta, eeygan saaxiibtinimada leh, ee xarrago leh ayaa ah kan keliya ee midabka adag leh.
Redbone Coonhound waa ku faraxsan yahay, xitaa xanaaqsan yahay aadna ugu fiican carruurta. Waxay noqon kartaa mid la yaab leh oo kalgacal leh waxayna leedahay jilif dhawaaqa dhawaaqa. Waxay jeceshahay inaad dadkeeda la joogto. Haddii gudaha looga soo kiciyo eeyaha, waxay si fiican ula qabsan doontaa nolosha qoyska. Coonhounds dhammaantood waa ugaarsadeyaal dabiici ah, mana aha wax adag in la tababaro taranka si ay u raacaan urta iyo geed qodaya. Redbone wuxuu leeyahay rabitaan xoogan oo uu kaga farxiyo sayidkiisa. Redbones waa ka diiran-yihiin, awood u leh inay helaan, ugana dhaqso badan geedaha geedaha kale ee badan. Sida coonhound-yada kale, Redbone waa feejignaan, deg deg badan oo awood u leh inay ka shaqeyso dhammaan noocyada cimilada dhul adag. Firfircoonidoodu waxay ka faa'iideysataa markay ugaarsadaan dal deyr leh ama meel dhaadheer oo dhagax ah. Iyada oo la riixayo murugada terrier-ka iyo awooda miiqashada ee Husky, Redbone waa riyadii ugaarsade kasta oo rumeysan ee runta ah inay rumowdo. Dareen dabiici ah oo dhir geedo ah ayaa lagu beeray Redbone, taas oo ka dhigaysa mid ku takhasustay ugaarsiga dhuunta. Laakiin sidoo kale waxay aqoon u leedahay raadinta iyo geedka geedka, cougar iyo bobcat. Markii loo isticmaalo ciyaarta, Redbones badanaa waxay ku ugaarsadaan xirmooyin. Redbones waxaa loo yaqaanaa inay sameeyaan eeyo biyo fiican leh. Guriga dhexdiisa waa mid naxariis badan oo naxariis badan. Lafdhabarku waa inuu fiicnaadaa bulsho yaraantiisana baray adeecid fudud sida socodka xadhig . Ka taxaddar bisadaha iyo xayawaannada kale ee aan xayawaanka ahayn. Haddii lagu soo koriyo bisad ka timid puppyhood waa fiicnaan karaan laakiin qaar ka mid ah Redbone Coonhounds ayaa iskudaya inay ugaarsadaan bisadaha dabocase . Qaar ka mid ah 'Redbone Coonhounds' wax badan ayaa hoos udhaca, halka kuwa kalena aysan haba yaraatee. Dhammaan waxay kuxirantahay qaabka bushimaha. Afka qaab-dhismeedka dhabta ah ee coonhound wax badan ayaa hoos u daadanaya. Redbone Coonhound wuxuu u baahan yahay shirkad adag, laakiin deggan, kalsooni leh, iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada si loo noqdo maskax ahaan deggan .
Dhererka: 21 - 27 inji (53 - 66 cm)
Miisaanka: 50 - 70 rodol (23 - 32 kg)
Caadi ahaan nooc caafimaad leh, in kasta oo khadadka qaarkood ay arkeen qaybtooda miskaha dysplasia.
Redbone Coonhound wax fiican kuma qaban doono guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Eeyahaani waa kuwo aan firfircooneyn gudaha gudaha waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan daarad weyn. Dharkooda cimilada oo dhan ayaa u oggolaanaya inay ku noolaadaan oo ku seexdaan banaanka oo ay ka shaqeeyaan nooc kasta oo dhul ah.
Noocani wuxuu u baahan yahay jimicsi badan. Waxay u baahan yihiin in la qaato maalin kasta soco ama orod. Coonhounds waxay dhashaan ugaarsade dabiici ah, sidaa darteed waxay u janjeeraan inay cararaan oo ugaarsadaan haddii aan si fiican loo deyn inta ay jimicsiga iskood u sameynayaan.
Qiyaastii 11-12 sano
Qiyaastii 6 ilaa 10 eey
Cadayasho mar mar ah ayaa sameyn doonta. Noocani waa iftiin shidan.
Sanado ka hor ugaarsadayaasha ugaarsiga badan kuwaas oo lahaa eey casaan ah oo aan la garanayn abtirsiintiisa, laakiin karti la xaqiijiyey oo dabagal iyo geedo geedo , ayaa eygooda ugu yeeray 'Lafdhab.' Kadib xoogaa breed ah oo dhab ah oo u heellanaa labadaba isboortiga iyo isboortiga waxay bilaabeen olole taranka xulashada si ay u soo saaraan huunno leh astaamaha lagama maarmaanka u ah sameynta coonhound ka sarreysa taas oo u dhalan doonta runta nooca midabka iyo is-beddelka. Bixiyeyaasha Koonfurta Mareykanka, Tennessee iyo Georgia inay noqdaan kuwo sax ah, waxay rabeen hound leh xawaare dheeri ah iyo ur kulul oo ka badan kuwa hadda jira. Eeyahii ugu horreeyay waxaa badanaa loo yaqaan 'Saddlebacks.' Midabka asalka ah wuxuu ahaa casaan, badankooduna waxay lahaayeen sumado sardho madow. Taranka xulashada, koorsada madow ayaa la soo saaray waxaana eeyaha adag ee casaanka ah loo yaqaanay Redbone Coonhounds. Sida dhacda inta badan noocyada kale ee loo yaqaan 'coonhound', awoowayaasha Redbone ayaa ahaa Foxhounds . Iskutallaab dhiig ah ayaa la sheegay in la sameeyay, sidoo kale waxaa la sheegay in lagu xisaabtamayo calaamadaha laabta iyo cagaha cad ee weli mararka qaarkood lagu soo bandhigo carruurta Redbone maanta. Natiijada isku-dhafkan waxay ka dhigeysaa eey ugaarsi lagu kalsoon yahay, maaddaama cabirka dhexdhexaadka ah ee muuqaalka, muuqaalka Foxhound-ish iyo geesinimadu ay ku jiraan dabeecaddeeda. Waxaa loo adeegsadaa ugu horreyn geedo geed, laakiin waxaa lagu waafajin karaa ciyaarta kale, oo ay ku jiraan bisadaha waaweyn. Dabeecaddan waxaa laga yaabaa in loogu magac daray nin hore u soo shaqeeyay, Peter Redbone oo reer Tennessee ah, in kasta oo badidiisa ay ka dhacday Georgia. Kaydka aasaasiga ee casriga casriga ah ee 'Redbone' wuxuu ka yimid George F.L. Birdsong of Georgia, oo ahaa ugaarsade caan ku ah ugaarsiga dawacooyinka. Wuxuu helay xirmada Dr. Thomas Henry 1840-yadii. Redbone wuxuu ahaa kii labaad ee loo yaqaan 'coonhound breed' ee laga diiwaan geliyo UKC, kii ugu horreeyayna waxaa la diiwaangeliyey 1902, laba sano kadib Black iyo Tan. Maanta waxaa loo isticmaalaa ugaarsiga raccoon iyo eey wehel ah. Redbone Coonhound wuxuu AKC aqoonsaday 2009.
'Lucy waa 16 todobaad. Iyadu waa dhiig-buuxiye UKC-sharciyeysan oo loo yaqaan 'Redbone Coonhound' oo leh tamar badan. Dhawaan ayay ogaatay biyaha, walina si aad ah uma hubo, hadana waa dabaal aad ufiican. Waxay saaxiibtinimo la leedahay DHAMMAAN eeyaha, waxay jeceshahay inay dadka la joogto oo ay jeceshahay inay labadaba la ciyaarto. Gudaha gudihiisa, waxay jeceshahay inay la seexato dadkeeda, laakiin bannaanka markasta waxay sanka la dhigtaa dhulka, iyadoo raadineysa wax ay ku calaliso ama ku ciyaarto. Iyadu waa eey weyn, oo waa lugaha iyo dhegaha oo dhan.
Ember Redbone Coonhound oo ah eey markay 6 bilood jir jiifsato cawska. — Iyadu waa eey aad u xiiso badan oo jecel.
Dhig Redbone Coonhound
Romeo iyo 'iskuxidhkiisa' Jameson eeygii oo ku seexday fadhiga
Annie Redbone Coonhound
Crockett Redbone Coonhound sida eey
i tusi sawir ah eey whippet
'Crockett the Redbone Coonhound dhammaantood wuu koray-culeyskiisuna waa 98 rodol. waana eeyga ugu macaan. Doollo wax badan, laakiin waan jecel nahay isaga. Sidoo kale dabbaal aad u fiican.
Eeg tusaalooyin dheeraad ah oo ku saabsan 'Redbone Coonhound'
Redbone Coonhound Sawirada 1
Redbone Coonhound Sawirada 2
Redbone Coonhound Sawirada 3
muqisho pekingese madow iyo caddaan
waa maxay eey boggle ah
buluug heeler border collie miisaanka
Jarmalka adhijir isku dhafka heeler cas